Ampidino PDF Unlock 1.0 ho an'ny Windows
Ampidino PDF Unlock
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (0.74 MB)
Ampidino PDF Unlock, PDF Unlock dia rindrambaiko novolavolaini Uconomix izay manala ny tenimiafinao aminny rakitra PDF. PDF Unlock dia programa iray hanokafana ireo rakitra PDF voahidy. Ny PDF Unlock dia hapetraka vetivety aorianny tsindrio ny rakitra fametrahana ary hitarika anao avy hatrany aminny efijery an-trano.
Nefa alohanny hahatongavana aminity dingana ity dia alao antoka fa napetraka ao aminny solosainao ny Framework .NET. Na dia tsy misy aza ny olana mety hitranga aminny ampahany lehibe aminny solosaina miorina aminny Windows, raha manana olana aminny fampandehanana ny programa ianao dia azonao atao ny mitazona anio antsipiriany io aminny eritreritrao iray. Azo atao koa ny mampiasa ny endri-javatra rehetra eo aminny efijery izay miseho aorianny nahavitanao ny fizotry ny fametrahana.
Ankoatry ny maha-tsotra azy dia interface interface ilaina koa izy io satria manolotra fiasa toa ny drag-drag na mizaha.Ny tanjonity programa ity dia ny hanokatra rakitra PDF voatahiry miaraka aminny teny miafina sasany na hamaha ny fiarovana PDF efa misy, araka ny efa nolazainay etsy ambony. Na dia misy programa marobe aminny Internet azonao atao aza, ny mampiavaka ny PDF Unlock ankoatry ny hafa dia manolotra fanohanana fanovana rakitra marobe. Azonao atao koa ny mamadika rakitra marobe aminny fotoana iray.
PDF Unlock Specs
Haben'ny rakitra: 0.74 MB